Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pananahana any Shiv Behari Jain | Ram Prakash: raharaha momba ny fiainana an-dàlambe miaraka amin'ny fiovan'ny fivavahany - Fikarohana momba ny fanambadiana gène
From: Afaka mihemotra lavitra ny fahafatesana ny volombava, Volana 1, avy amin'i Satwant K. Pasricha, PhD
Ny fiainan'i Shiv Behari Jain-Mpikambana ao amin'ny fivavahana Jain
Shiv Behari Jain dia mpandranto iray na mpandraharaha matihanina izay niaina tao Firozabad, tanàna iray any avaratr'i Inde. Izy dia tao amin'ny Jain fivavahana. I Shiv dia nomena voninahitra, satria izy koa dia nandray anjara tamin'ny politika eo an-toerana sy ny fikambanana. Maty tamin'ny Jolay 10, 1965 izy.
Fiovan'ny Fivavahana: Shiv Behari Jain Ny fiverenan'ny fivavahan'i Hindu
Ram Prakash dia teraka tamin'ny 10 1966 tamin'ny volana 9 taorian'ny fahafatesan'i Shiv Behari Jain, any amin'ny tanàna avaratr'i Firozabad. Ny ray aman-dreniny dia mpamboly fitaovana maotina izay anisan'ny Hindu fivavahana.
Raha Ram no 4 na 5 taona, dia nanomboka niresaka momba ny fiainana taloha izy. Indray andro dia nisy rahalahy zokiny nantsoina hoe Ram, ary nandidy azy haka rano vera. Ram namaly hoe:
"Izaho tsy Ram Prakash, Jain Saheb" Ao India, "saheb" dia lohateny napetraka taorian'ny anaran'ny lehilahy ho mariky ny fanajana. Amin'ny teny hafa dia nilaza i Ram fa olona ambony izy. Ram dia nanolotra ny anarany velona taloha ho "Shiv Behari Jain." (1)
Ram Prakesh dia mahatsiaro ny fiainany taloha momba ny fianakaviana sy ny adiresy
Ram dia nitantara antsipiriany marobe momba ny fiainany taloha, anisan'izany ny adiresiny tany Firozabad, ny anaran'ny vadiny taloha, ary koa ny isan'ny rahalahiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy tamin'ny fiainany tamin'ny naha Shiv Behari Jain azy. Tsaroan'i Ram koa ny asa soa natolony tamin'ny fiainany taloha, nitaterany fa nanome vola ho an'ny oniversite, hopitaly ary tempolin'i Jain izy.
Reincarnation & Change of religion: Na dia teraka Hindoa aza i Ram dia mitandrina ny fomban-drazana Jain
Ram dia nampiseho fomban'ny mpikambana tao amin'ny fivavahana Jain, izay tsy dia mahazatra loatra tamin'ny ankizilahy Hindu iray izay tsy nampianarina ireo fomba fanao Jain ireo. Ohatra, i Ram dia te hihinana sakafo hariva talohan'ny filentehan'ny masoandro, tsy misotro rano fotsiny ary tsy hamono bibikely. Ho an'i Jains, ny tsy fisian'ny herisetra dia fototry ny finoany, izany no mahatonga ny bibikely tsy hovonoina. Rehefa nomena an'i Ram ny sary iray Mahavira, mpitarika mpitarika sy mpitondra fanavaozana ny fivavahana Jain, dia nivavaka indroa isan'andro izy teo anoloan'ity sary ity.
Ram Prakesh tsy mahita ny harena taloha ary mamantatra am-pahibemaso amin'ny fiainany taloha Persona
Fantatr'i Ram fa tsara kokoa ny fananany ara-bola amin'ny fiainany taloha toa an'i Shiv Behari Jain. Nitarany izy fa ny fianakaviany dia niaina tao amin'ny tranon'ny kachcha, izay naorina tamin'ny biriky tsy nokombaina. Tsaroany fa tao anatin'ny fiainany taloha izy dia nanana trano lehibe, pukka iray, izay naorina tamin'ny biriky vita tamin'ny baka. Nahatsiaro i Ram fa nandritra ny fiainany teo aloha dia natory teo am-pandriana izy, kanefa teo amin'ny fiainany ankehitriny dia natory teo am-pandehanana izy, nisy fandriana vita amin'ny rindrina ary nisy tady matevina nifampikasokasoka. Tsaroany fa nanana seza iray izay nipetraka izy, saingy tamin'ny fiainany ankehitriny dia tsy nisy izy.
Rehefa nihalehibe izy, Ram tsy namaly ny anarany intsony, ny fahitany ny fiainany toa an'i Shiv Behari Jain dia tena lehibe. Neken'ireo mpampianatra azy izany ary niantso azy hoe "Jain."
Ram Prakesh dia nihaona tamin'ny fianakaviany taloha, izay manaiky Azy ho Shiv Behari Jain Reborn
Nahafantatra ny fihetsika tsy mahazatra ny mpikambana ao amin'ny tanàna Ram ary niely ny teny. Ireo mpamily fiara ao amin'ilay faritra dia nahalala ny tantarany ary nandalo izany tamin'ny fianakavian'i Shiv Behari Jain tao Firozabad, izay tonga nitsidika an'i Ram. Afaka nahafantatra sy nanonona ireo olona ao amin'ny fianakaviany taloha izy.
Mba hitsapana ny fahalalany, dia nasehon'i Shiv ihany koa ny mombamomba ny Ram ny havany. Afaka nahafantatra tsara sy nanonona ireo mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Shiv ireo Ram i Ram tsy misy fanampiana na fanontaniana mitarika. Niaiky ny fianakavian'i Shiv noho ny fahalalany ny fiainany taloha, Ram raha ny fahaterahan'i Shiv Behari Jain. Nomeny fanomezana Ram ary namporisika izy ireo hitsidika ny tranony any Firozabad. Ram dia hitsidika ny fiainany taloha indray mandeha na indroa isam-bolana ary mijanona miaraka amin'izy ireo mandritra ny andro 5.
Ny fitsidihan'i Ram amin'ny fianakavian'i Shiv Behari Jain dia mampahatsiahy ny fijanonan'i Daniel Jurdi tamin'ny fiainany taloha tany Libanona. Ity toe-javatra niainan'ity raharaha ity dia mampiseho ny fitovozan-kevitra miavaka eo amin'ny endriny ara-batana mandritra ny androm-piainan'ny iray. Apetraho amin'ny sarin'i Rashid ny sarinao amin'ny sarin'ny fiainany taloha mba hanitarana azy.
Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any amin'ny: Trangam-panjakan'olo-tokana ao Rashid Khaddage | Daniel Jurdi
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: ny fianakavian'i Shiv Behari Jain sy Ram Prakash Deny fifandraisana taloha
Dr. Pasricha dia nanadihady ny fianakavian'i Shiv Behari Jain sy Ram Prakash tamin'ny volana Oktobra 1975. Ny fianakaviana roa dia niampanga fa tsy mbola nihaona na nifaneraserany talohan'ny fanambaran'i Ram ny fahatsiarovany an'i Shiv amin'ny fiainana taloha. Ny rain'i Ram dia nitantara fa indray mandeha dia nandre an'i Shiv Behari Jain nanao lahateny nandritra ny fivoriana ara-politika, saingy tsy nanana fifandraisana mivantana taminy. Ny renin'i Ram dia nilaza fa mbola tsy nahare momba an'i Shiv Behari Jain. Nanamarika ihany koa ny Dr. Pasricha fa ny fahasamihafana eo amin'ny fivavahana sy ny harena dia nahatonga ny fifandraisana teo aloha teo amin'ireo fianakaviana roa tena tsy azo inoana.
Tao amin'ny tafatafa iray tao amin'ny 1975, fony Ram no 9 1 / 2 taona, raha nanontaniana ny anarany, dia namaly avy hatrany "Shiv Behari Jain." Mbola nanome fanomezana an'i Ram ny fianakavian'i Shiv ary mbola nanohy ny fitsidihany ny fiainany taloha tao Firozabad . (2)
Fiovana amin'ny finoana: Shiv Behari Jain dia avy amin'ny fivavahana Jain, raha teraka tao amin'ny finoana Hindu kosa i Ram Prakesh.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Niverina indray i Shiv Behari Jain tamin'ny fiainany taloha.
1. Pasricha, Satwant, Afaka hihemotra ankoatra ny fahafatesana ve ny saina? Volan'ny 1: Fikarohana momba ny fiterahana amin'ny fanambadiana, Ny trano famoahana Harman, New Delhi, 2008, pejy 9
2. Ibid, pejy 9-12